Tenga PF 750 (959151-50-9) vatengesi hplc≥98% | AASraw Fat Loss
/ Products / Fat Kurasikirwa poda / PF 750
Rating: Category: Fat Kurasikirwa poda Tags: Tenga PF 750, PF 750, PF 750 inotengeswa, PF 750 vanotengesa
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika kuhutano hweP PF 750 (959151-50-9), pasi pemutemo weCGMP uye kutaridzika kwehutano hwehutano hwakanaka.
PF 750 inokosha, nguva-inotenderera, irreversible fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor (IC50 = 16.2 nM) inoratidzira chero basa pane mamwe maitiro eine serine hydrolases. Inosarudza inhibits FAAH mukati mehutano hwepakati. ne IC50 maitiro 0.6 uye 0.016 μM apo yakatorwa neChristian FAAH yekare ye 5 uye 60 maminitsi, zvichienderana. Fatty acid amide hydrolase (FAAH) ndiyo enzyme inokonzera hydrolysis uye inactivation
II. PF 750 kushandiswa mumhepo:
2.Iyo basa reP PF 750?
PF-750 inopiwa sekristalline yakasimba pfumbi. Nzvimbo yekugadzirisa inogona kuitwa nekupedza PF-750 mune imwe yega yega yegorosi yakanatswa negesi inert. PF-750 yakasvibiswa muzvinhu zvinokonzerwa ne-ethanol, DMSO, uye dimethyl formamide (DMF). Iyo solubility ye PF-750 mune ethanol inenge 1 mg / ml uye inenge 20 mg / ml muDMSO neDMF. PF-750 iri zvishoma nezvishoma inogadziriswa mumabhasiki ane mvura. Nokuda kwehuwandu hwekugadzirisa mu-buffers aqueous, PF-750 inofanira kutanga yakasanganiswa muDMSO uye yobva yakanatswa pamwe nechose chinokonzera chekusarudza. PF-750 ine sarubility inenge ye0.125 mg / ml mune 1: 5 mhinduro yeDMSO: PBS (pH 7.2) uchishandisa iyi nzira. Hatinokurudzira kuchengetedza mhinduro yakasimba kwemazuva anopfuura.
3.Kuziva nezve PF 750
Nokuda kwekusagadzikana, kupisa tubhu iri pa 37 ° C uye kuibvongodza mubhati rinoshandiswa. Variko vakasiyana-siyana vanogadzirisa mabheji akasiyana-siyana ekugadziriswa kwemagetsi, chete nokuda kwekutaridzirwa. Kana hutachiwana hunodiwa kuti kuedza kuve kwakakura zvikuru kusvika kune kuvharira kwemugadziri wechigadzirwa, wedzera se-solvent kuti ubatsire kupera kana kuchinja maitiro ako pachako.
IV. Nzira yekutenga PF 750 kubva kuAASRAW?
Iva wokutanga kuongorora "PF 750" kukanzura mhinduro
Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni (15)
Fat Kurasikirwa poda (34)
PCT Zvinodhaka (9)
Plant Plant Extract (1)